China Center Drive lathe Ho fanohanana ny orinasa Roller sy mpanamboatra | Oturn
Latina CNC farany-droa
Ny lathe cnc double-end dia milina mahomby sy avo lenta. Ny workpiece clampped dia afaka manodina ny boribory ivelany, ny tarehy sy ny lavaka anatiny miaraka amin'izay. Ny fahombiazan'ny famokarana dia avo kokoa noho ny fizotran'ny nentim-paharazana, ary ny fiarahan'ny mpivady sy ny fahamendrehan'ireo faritra voahodina dia tsara kokoa.
Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, ny fampidinana sy ny famoahana ireo fitaovana fanampiana ary ny fampidinana automatique ary ny fampidinana ireo fitaovana dia azo omena an-tsokosoko. Ny savaivony fanidiana dia manomboka amin'ny φ5mm-φ250mm, ary ny halavan'ny fanodinana dia manomboka amin'ny 140mm-3200mm ..
Mifanohitra amin'ny lathe CNC-spindle CNC
Ny fitaovana milina dia ampiasaina amin'ny famadihana ny zana-kazo fohy sy ny kapila kely.
Amin'ny alàlan'ny famindrana mandeha ho azy eo anelanelan'ny fizarana roa amin'ny fizarana asa, ny milina dia mamita ny fanodinana ny lavaka anatiny, ny faribolana ivelany ary ny faran'ny roa amin'ny ampahany.
Ny milina dia azo ampiarahana amin'ny manipulator, mandeha ho azy ny famoahana sy ny famoahana entana ary ny fitehirizana fitaovana hamitana ny fanodinana automatique tanteraka ny parts.t dia novolavolaina manokana ho an'ny fanodinana ny zoro fohy sy ny faritra lovia kely.
Fanohanana ny vahaolana amin'ny milina fanodinana
Ny roller manohana dia iray amin'ireo ampahany manan-danja amin'ny "kodiarana efatra sy fehikibo iray" amin'ny bulldozers crawler sy excavator hydraulic.
Misy famaritana 4 an'ny roller bulldozer ary famaritana 7 an'ny roller excavator, arak'ireo maodelintsika efa misy, mizara telo izahay:
Tohano ny elanelam-pandrefesana roller sy ny masinina voatondro
Roller savaivony ivelany
Ny sakan'ny headstock
(Tokony ho 2D)
Rough 234 (vokatra vita 225)
Rough 286 (vokatra vita 279)
Ny sary sclemika momba ny roller manohana dia alain'ny masinina toy izao
SCK205S latina avo lenta an'ny CNC
■ Ny masinina dia mandray farafara fandriana 450 mirona, izay manana hamafisana tsara sy fanesorana puce mety.
■ Ny boaty spindle dia mampifandray ireo singa telo amin'ny rafitra spindle, ny valizy ary ny fonosana clamping, miaraka amina rafitra mirindra sy asa azo antoka. Ny fifangaroana dia mifono vy. Ny savaivon'ny clamping an'ny clamp dia mizara roa.
■ Ny clamp dia karazana collet. Ny fika manitsy dia apetraka ao amin'ny chuck elastika hisolo ny faritra fanodinana ary hanova ny savaivony clamping. Ny rantsan-tànana manitsy no mila soloinao, izay haingana sy mora.
■ Fitaovana mankaleo marobe no takiana arakaraka ny ampahany milina. Mba hisorohana ny fanelingelenana ireo fitaovana, namboarina manokana ny turret, ary lehibe ny savaivony mihodina amin'ny lohan'ny fanapahana. Mba hahatonga ny turret ho hentitra kokoa, ny haavon'ny turret dia 125mm.
■ Ny masinina dia manana rafitra fanaraha-maso fantsona roa, ary ny fitaovana roa mijanona dia azo ampifandraisina amin'ny spindle amin'ny fotoana iray na misaraka mba hanatanterahana ny fanodinana miaraka na ny filaharana amin'ny faran'ny roa.
■ Mba hahafeno ireo fepetra takiana samihafa amin'ny mpanjifa samihafa, ity fitaovana milina ity dia azo ampiarahana amin'ny console ankavia / havanana hisafidianan'ny mpanjifa.
■ Raha ny amin'ny fandefasana sy ny famoahana entana, amin'izao fotoana izao dia famoahana sy famoahana tanana. Raha jerena ny lanjan'ny vesatry ny kodiarana mpanampy, ny fitaovana fampidinana na famoahana automatique karazana karazana dia azo ampitaina, arakaraka ny fifampiraharahana amin'ny mpividy.
Ny savaivony fandriana farafahakeliny
Savaivony mihodina farany ambony amin'ny vatana mihetsiketsika
Savaivony clamping indrindra
Halavan'ny fanodinana farany ambony
Ny sakany amin'ny loha-loha
Spindle clamping manokana
Savaivony boribory spindle
Haavo hatrany afovoan'ny ampela mankany amin'ny tany
Servo mitsambikina, hidy hidy
Antsy toradroa antsy ivelany
Diameter an'ny bara mankaleo
Ny haben'ny masinina (halavany × sakan'ny × haavony）
Teo aloha: Flat Type Lathe
Manaraka: Lathe Sodina Threading Lathe